Codsiga Xaaladda Deggan - Settled
Boggaan wuxuu ka jawaabayaa qaar ka mid ah su’aalo guud oo ku saabsan Xaaladda Deggan iyo nidaamka codsiga.
Waa maxay Brexit?
23 kii Juun 2016 shacabka reer UK waxay u codeeyeen inay ka baxaan EU afti dadweyne oo ay ku dhawaaqday Dowladdii waqtigaas.
Brexit waa magaca caanka ee ka bixidda UK Midawga Yurub (EU). Taariikhda haddeer waa 31 Jannaayo 2020, waqtiga uu Xilliga Kala Guurka bilawdo, kaasoo xiriirka mustaqbalka ee UK iyo EU laga wada xaajoonayo. Kani wuxuu dhamaanaya 11ka habeennimo ee 31da Disembar 2020, markaasoo ay UK si shariciya uga bixi doonto EU. Brexit waxay tahay in qaban-qaabada iyo heshiisyada xubinnimada UK ee EU ay dhammaan doonaan. Qabanqaabooyin cusub ayaa loo baahan yahay in la diyaariyo, ay ka mid tahay xaqa muwaadiniyiinta EU ee hadda halkan jooga inay six xor ah ugu noolaan karaan, ugana shaqaysan karaan UK.
Muwaadiniinta EU ee ay saameysay waa kuwa u dhashay 27da waddan ee EU (Islofakiya, Romaniya, Hangariya, Polaan, Bulgariya, Jamhuuriyadda Jek, Beljamka, kruwesiya Latfiya, Lithiweniya, Islofeniya, Istoniya, Oostariya, Jarmalka, Fransiiska, Isbaanishka, Bortaqiiska, kruwasiya, Qubrus, Danmark, Iswiidan. Fiinlaan, Giriiga, Italiya, Luksambur, Nederlaan, Malta, Ayrlaan) iyo waddamada EEA (Noorway, Ayslaan, Liechtenstein) iyo Iswisarlaan.
Si loo fududeeyo, waxaan u ticraacaynaa muwaadiniinta EU guud ahaan websaydkan, laakiin haddii aan la cayimin, waxaan dhab ahaan ula jeednaa muwaadiniinta 31ka waddan ee sadarka kore.
Maxay aniga ii tahay?
Hadaad tahay muwaadin ka yimid waddan EU/EEA, ama muwaadin Iswiss ah, kuna nool UK, heshiiska ilaaliya xuquuqdaada si aad ugu noolaatid, ugana shaqaysatid halkan mar danbe kama jiri doonaa halkaan. Si lagugu oggolaado adiga iyo qoyskaaga inaad joogtaan, kana shaqaysataan halkan, aadna haysatid xuquuqdaada hawalaha bulshada, faa’iidooyin, daryeel iyo caafimad, waxay Midowga Yurub (EU) iyo Boqortooyada Midowday (UK) isku afgarteen shuruudo gaar ah iyo ilaalin loogu talagalay muwaadiniinta EU ee ku nool UK.
Waxaa dhici karta in UK ay ka baxdo qaraar la’aan, ku magacaaban xaalad qaraar-la’aan. Hase ahaatee, Dawladda UK waxay sheegtay inay weli ixtiraami doonto heshiiskii la gaarey ee la xiriira xuquuqda muwaadiniinta haddii xaalddaasu timaado.
UK waxay si gaar ah oo la mid ah heshiiskaas la sameysay waddamada EEA iyo Iswisserlaan, sidaa la’adligeed muwaadiniinta Noorway, Ayslaan, Liechtenstein iyo Iswisarlaan ma saameyn doonto xaalad qaraar-la’aan.
Muwaadiniinta EU/EEA iyo Iswiska ee deggan UK waa inay codsadaan xaaladda socdaalka cusub si ay ugu sii noolaadaan, ugana shaqaystaan UK iyo helidda daryeelka caafimaadka iyo dheefaha amniga bulshada ee ay xaqa u leeyihiin . Xaaladdan cusub waxaa lagu magacaabaa Xaaladda Deggan, qorshaha lagu hirgalinayana waxaa lagu magacaabaa Qorshaha Dejinta ee EU.
Waqtiga kama dambeysta ee codsiga waa 30 Juun 2021, laakiin waxaan si xooggan kugula talinaynaa inaad codsato 31da Disember 2020 ama ka hor. Xilliga 6da bilood ee ka danbeysa taariikhdaas waa xilli muddo dheeraada, si loogu oggolaado Muwaadiniinta EU waqti dheeraada oo ay ku codsadaan, laakiin aad bay usii adkaanaysaa inaad caddeysid xaq u lahaanshaha guri, daryeel caafimaad, dheefaha dhaqaalaha la’aanta haysashada ka-hor Xaaladda Deggan ama Xaaladda Deggan.
Wax iska beddelaya xaaladdaada ma jirto illaa iyo taariikhahaas, laakiin waa muhiim inaad codsato hadaad rabto inaad kusii noolaato, kana shaqaysato UK, sii haysatidna xuquuqaha aad hadda haysatid. Adiga oo aan ku codsanin taariikhaha xadidan ee korka ku xusan, waxay ka dhigan tahay inaad waayi karto xuquuqdaada shaqo, inaad guri kireysato ama aad hesho dheefaha dhaqaalaha ama daryeel caafimaad. Ugu dambeyntii, tani waxay kuu horseedi kartaa in lagaa saaro UK.
Codsigu waa bilaash, in kasta oo ay jiraan kharashyo ku lug lahaan kara qaybo ka mid ah nidaamka hawsha. Xaaladda Deggan waxay bixinteedu ku salaysan tahay degganaanshaha oo keliya. Uma baahnid inaad shaqeynaysid, dheefaha dhaqalaahana waad heli kartaa.
Qof kasta oo qoyskayga ah ma codsan karaa?
Haa. Muwadiniinta EU iyo qoysaskooda, oo ay ku jiraan carruurtooda, waa inay codsadaan.
Haddii qoyskaaga ay ku jiraan dad aan u dhalan EU, waa inay ayaga xataa codsadaan hadday yihiin:
Xaaskaaga/saygaaga, lammaane madani (isla nool) ama lammaane waara (isla nool);
Carruurtaada, carruurtay carruurtaada dhaleen ama carruurtay carruurtaada carruurtoodu dhaleen (21 sano ka yar);
Carruurtaada kugu tiirsan ee ka weyn 21 sano;
Waalidikaa, awoowayaashaa/ayeeyooyinkaa ama abootooyinkaa/abkowyadaa.
Maxaan u baahanahay saan u codsado?
Waxaad u baahan tahay baasaboor ansax ah ama kaar Aqoonsi. Haddii ay ka dhaceen (ama mar dhaw uu dhici rabo) ama uu kaa lumay, waa inaad sida ugu dhakhsiyaha badan u codsataa dukumiintiyo cusub.
Haddii aad leedahay Lambarka Ceymiska Qaranka (NIN), diyaarso. Waxay ka caawinaysaa Xafiiska Arimaha Gudaha inuu hubiyo canshuurta iyo diiwaanada dheefaha dhaqaalaha bulshada si loo caddeeyo degenaanshahaaga UK. Hadaadan haysan NIN, waa inaad raacisid dukumintiiyo siyaadaa si aad u caddeysid degganaanshahaaga UK.
Hadaad u samaynaysid codsi carruurtaada, waxaad u baaahan tahay inaad caddeysid xiriirkiina, sida warqadda dhalashada.
Sidoo kale waxaad u baahan tahay cinwaan iimeel si aad u sii wadatid nidaamka codsiga internetka ee tixraaca mustaqbalka iyo si uu Xafiiska Arrimaha Gudaha kuugu soo diro wixii macluumaada ee soo kordha, kuna saabsan codsigaaga.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad keento macluumaad siyaado ah oo caddeynaya inaad ku noolayd UK shanti sano ee lasoo dhaafay.
Waxaad halkan ka heli kartaa liiska hubinta dukumiintayada uu Xafiiska Arrimaha Gudaha aqbali karo.
Waxaan haystaa qaar dukumentiiyo socdaal ah!
Haddii aad haysatid Shahaadada Diiwaangelinta ama aad ka diiwaan gashan tahay Qorshaha Diiwaangelinta Shaqaalaha waa inaad codsato.
Hadaad haysatid dukumiintiga Degganaanshaha Rasmiga ah, weli waa inaad dalbataa. Dukumiintigan wuxuu noqonayaa mid aan ansax ahayn 31ka Disembar 2020. Hase ahaatee, wuxuu caddayn u noqonayaa degganaanshahaaga muddada codsigaaga Xaaladda Deggan.
Muwaadiniinta aan ahayn EU ee haysta ogolaanshaha deggenaanta way codsan karaan haddii ay bixin karaan caddeyn xiriirkooda dhalasho ee muwaadin EU ah, iyo sidoo kale ogolaanshaha deganaanshahooda bayometrika.
Haddii aad haysato Joogitaanka aan Xadka Lahayn (ILR) uma baahnid inaad codsato. Xaaladda Deggan waa nooc ah Joogitaanka aan Xadka Lahayn. Hase yeeshee, waxaa laga yaabaa in codsiga Xaaladda Deggan ay ku siiso xuquuqo siyaadaa iyo illaalin dheeraad ah. Hadaad codsato, waad ka gudbi kartaa qaybta caddaynta deggenaanshaha maadaama aad mar hore cadeeysay taas.
Maxaan helayaa, xuquuqahaygase maxay noqon doonaan?
Waxaad helaysaa Joogidda aan Xadka Lahayn, oo ah xaaladda socdaalka UK oo kuu siinaysa xuquuq aad kusii noolaatid, ugana sii shaqaysatid UK. Iyada oo ay ku xiran tahay dhererka wakhtiga aad ku noolayd UK waqtiga codsigaaga, ama caddeynta waqtigan aad haysatid, waxaa jira laba qaybood:
Xaalada ka hor-Deggan baa lagu siin doonaa hadaad ku noolayd UK in ka yar shan sano markaad codsato, ama hadaad soo gudbin weydo caddeyn inaad ku noolayd UK in ka badan shan sano.Wuxuu ansax yahay shan sano oo keliya, waxaadna u baahan tahay inaad codsato Xaaladda Deggan markay tani kaa dhacdo, ama aad gaartid deggenaansho shan sano ah ee UK. Waad shaqeyn kartaa, kiraysan kartaa ama iibsan kartaa guri, ka heli kartaa daryeel caafimaad NHS, laakiin dheefaha qaarkood ayaa laga yaabaa in la xaddido iyadoo ay sabab u tahay shuruudaha dheeriga ah ee lagu dabaqay.
Xaaladda Deggan baa lagu siindoonaa hadaad tusin kartid inaad ku noolayd UK shan sano ama ka badan markaad codsato. Kani wuxuu ku siinayaa nooc ka mid ah Joogidda aan Xadka Lahayn, oo leh xuquuqda aad ku shaqeysid, kiraysato ama iibsatid guri, helitaan daryeel caafimaad iyo arrimaha kale ee dheefaha bulshada sida manfacyada iyo marin u helka waxbarasho tasoo la mid ah shuruudaha muwaadiniinta UK.
Waxaad xaq u ledahay inaad ka baxdid iyo inaad soo gashid waddanka, hase yeeshee, waad luminaysaa xuquuqdaas hadaad waddanka ka maqnaatid shan sano ama in ka badan oo joogta.
Waxaad kaloo xaq u ledahay isukeenida qoyska, taaso micnaheedu yahay in xubnaha qoyska dhow (carruurta, iyo waalidiinta, iyo carruurtooda iyo waalidiintooda) ay kusoo biiri karaan tariikh danbe.
Haddaad rabtid, waxaad codsan kartaa dhalashada Ingriiska sanad kaddib markaad heshay Xaaladdaada Deggan, hadaad buuxisid shuruudahiisa. Hadaad guursatey muwaadin Ingriisa waad dalban kartaa isla marka aad heshay Xaaladdaada Deggan.
Waxaad bilaabi kartaa inaad ka dalbatid Xaaladdaada Deggan bogga internetka ee gov.uk.
Deggan waxaa ka go’an in ay hagaan, wargeliyaan, caawiyaan kuwa nugul iyo kuwa ay adag tahay in la gaaro ee ah muwaadiniinta EU-da kuwaas oo halis ugu jira in aysan lahayn sharci marka ay dhamaato Qorshaha Dejinta EU. Bartaan ujeedadeedu waxay tahay inay bixiso hagitaan dheeriya oo qaas ah, taasoo qaas u ah xaaladahaaga.
Boggan waxaa marki ugu dambeysay la cusbooneysiiyay Arbacadii 13-01-2020. Deggan waxay ku dadaali doontaa mar kasta in la cusboonaysiiyo macluumaadkan si ay uga muuqato xaaladda hadda taagan.